माघे संक्रान्तिको दिन गर्नुहोस् यस्तो विशेष काम, सधैं रहन्छ माता लक्ष्मीको आर्शिर्वाद ! - Sakaratmak Soch
माघे संक्रान्तिको दिन गर्नुहोस् यस्तो विशेष काम, सधैं रहन्छ माता लक्ष्मीको आर्शिर्वाद !
माघे संक्रान्ति सूर्य देवको कृपा पाउनको लागि निकै विशेष हुनेछ । यस दिन भगवान विष्णु र लक्ष्मीको पनि पूजा गर्नु निकै शुभ मानिन्छ । जसको प्रभावको कारण वर्षभरिको काममा सफलता मिल्नुको साथै धेरै धन प्राप्त हुने मान्यात रहेको छ । सौभाग्यवश यो दिन लक्ष्मीको दिन पनि हो। यस्तो अवस्थामा यस दिन गरिएको एउटा साधारण उपायले वर्ष भर नै प्रशस्त धन लाभ हुने मान्यता रहेको छ ।
माघे संक्रान्तिको दिन सफा १४ वटा कौडा लिनुहोस् । यसलाई केसरी मिश्रित दूधले अभिषेक गर्नुहोस् र त्यसपछि तिनीहरूलाई गंगाजलले धुनुहोस् र सफा प्लेटमा राख्नुहोस्। त्यसपछि माता लक्ष्मीको तस्वीर तथा मूर्ति अगाडी एउटा सुद्ध गाईको घिउको दियो बल्नुहोस् । यसपछि देवी लक्ष्मीको ध्यान गरेर १४ पटक ओम संक्रान्ताय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोस्। त्यसपछि राति १२ बजे माता लक्ष्मीको आगाडी राखेका कौडा उठाएर विभिन्न सफा ठाउँमा राख्नुहोस्। यस्तो गर्नाले घरमा माता लक्ष्मीको वास सदैव रहन्छ र धेरै आशीर्वाद रहनेछ ।
साथै यस दिन कालो तिल र सखर दान गर्नुहोस् । भोलिको दिन तिल र सखर दान गर्नाले विवाहित व्यक्तिको जिवनमा सौभाग्य र सुख बढाउँछ । साथै परिवारलाई संकटबाट बचाउन परिवारका सदस्यको एक मुट्ठी कालो तिल ७ पटक टाउकोमा घुमाएर घरको उत्तर दिशामा फालिदिनुहोस् । हरेक काममा प्रगति हुन थाल्नेछ।
आफुले माया गरेको मान्छेको मन नदुखाई कसरि ब्रेकअप गर्ने ?